I-China UV Resistance Deep Embossed Solid WPC Decking abavelisi bangaphandle kunye nabathengisi | ULihua
Ukuchasana kwe-UV nzulu kwe-WPC eQinisekisiweyo yangaphandle
Into No: LH140S22.5B
Ixabiso$ 2.99 / UM
Umbala: Amalahle, umbala weWood, uMthi oBomvu, iMaple. Njl
Ukuhambisa iZibuko: Shanghai Port okanye wena
Ixesha lokukhokhela: IINTSUKU 7-17
Isanti / iBrashi
Egqithileyo I-Anti-Slip Wood Plastic edityanisiweyo yeWPC yokuHamba ngokuqinileyo
Okulandelayo: Ubomi obude obuRisayilishwe ngaphandle Ingubo yeplastiki yePlastiki edibeneyo
Q: Zithini iindlela zakho zokuhlawula?
Q:Xa kuthelekiswa nomthi wokwenene, ziziphi izibonelelo ze-WPC?
Q: Ngaba iimveliso zeplastiki zomthi ezidityanisiweyo zinobuhlobo kokusingqongileyo?
Umgangatho wokuqina wokuqina
Ingaphandle yomgangatho oqinileyo we-WPC
Ukuhonjiswa okuphezulu kweWPC
UV ukumelana decking eqinileyo
WPC decking ngaphandle, Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC decking umgangatho, WPC nokwadala, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking edityanisiweyo,